ဖူးနုသဈ: အတောငျအလကျ ပွညျ့ပွီးခါမှ
Posted by ZT at 12:41 AM
တတ်ထားတဲ့ ပညာ အသုံးမချရတော့ ဘယ်ရမလဲ ယာက်ကျားယူပစ်လိုက်တယ်။ မှတ်ရော..
လူငယ်အရံခုံ တယောက်လာဖတ်သွားပါတယ်း)))) ရောင့်ရဲခြင်းနဲ့ ပြည့်ဝနေပြီးP
(ရထားတဲ့ ဘှဲ့လကျမှတျသုံးပွီး ပိုကျဆံရှာလို့ ရတာတော့ နညျးနညျးတျောသေးတယျ )
ဘာမှ မတတ်ခဲ့တာ တော်သေးတယ်။
အကုန် အလုပ်ထဲရောက်မှ ပြန်သင်ရတာချည်းပဲ။ တတ်အောင်သင်ခဲ့ရင် အလကား အချိန်ကုန်နေဦးမယ်။
ထမင်းစားလက်မှတ်ရပြီ အလုပ်မရသေးသူပါ။ ^_^
ရထားတဲ့ ဘွဲ့နှင့် လုပ်စားလို့ မရဘူးထင်ပြီးကာမှာ၊ တစ်ပတ်လည်ခဲ့ပါတယ်၊ အရာရာတိုင်းဟာပြောင်းလဲနေသမို့ upgrade နှင့် ပြောင်းလည်းပစ်ဘို့လိုပါမယ်၊ ထုတ်လုပ်ရေးဘက်ရောက်နေတဲ့သူက တစ်ချိန်မှာ ပရိုဂရမ်ပြန်ရေးရင် ရေးဖြစ်ဦးမှာပါ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်မဟုတ်လား၊ ထင်မြင်ချက်လေးပါ။
မွန်းအောင် ဆိုထားတဲ့ လူငယ်ခြေကျ သီချင်းလေး သွားနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါမှ မကြားဘူးပါ။ ခေတ်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ သီချင်း နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလှပြီ... ခေတ်ကိုပိုထင်ဟပ်စေလာတယ်။
အိမ်က အတင်းတိုက်တွန်းလို့ ဂွမကိုင်ရပဲ တူကိုင်ခဲ့ရသူပါ
ခုကျပြန်တော့လည်း ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် မြေကြီးစစ်ရတဲ့ တီကောင်ဖြစ်နေပြန်ပါသကော အကိုရာ...
လူငယ်ခြေကျသီချင်းကို အရင်က နာမည်ပဲ ကြားဖူးတာ အခုမှ နားထောင်ဖူးတော့တယ်...
Thanks for Sharing Ko ZT…
ကျောင်းပြီးတော့ စာတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်သေးတယ်. ကျောင်းပြီးကာစ တက်သစ်စကို ဘယ်ကမှ လက်မခံ၊ အလုပ်မရတော့ လုပ်သက်မရှိ၊ ရတဲ့အလုပ်က ၀မ်းမ၀၊ ကျနော်လည်း အစက ပရိုဂရမ်မာလုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ နောက်တော့ system analysis ကို အားသန်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်လာတာက တခြား။ ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြားပါဗျာ။ ဈေးကွက်နောက်ကို လိုက်ရင်း လိုက်ရင်း...ကိုယ်ကိုတိုင်ပျောက်ဆုံးနေတာကြာပြီ။ ဒီရောက်ပြန်တော့ ပရိုဂရမ်မာတွေက ဦးမော့နေတော့ အင်ဂျင်နီယာကနေ ပြန်ပဲလှည့်ရတော့မလိုလို...